Zoba iVenkile yam ekuvumela ukuba wenze ngokulula amabali amancinci oopopayi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kwinkqubo yokusebenza kwezixhobo zefowuni esizaziyo ezivela kwi-Android, sinazo usetyenziso ezahlukeneyo zoyilo kunye nobuchule kunika umdla.
Enye yazo zoba iVenkile yam, usetyenziso oluye lwasungulwa kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, usetyenziso lweapp kunye nevidiyo yomdlalo wevidiyo. Esi sicelo siyakuvumela yenza amabali amancinci opopayi ukusuka kwiividiyo ozirekhodile ngekhamera ye-smartphone yakho. Isixhobo esinomdla sokuhlela iividiyo ezisimahla.
Zoba ubomi bam unesitishi sakhe seYouTube apho kukho izindululo ezinomdla kakhulu. Kungenxa yoko le nto usetyenziso lwe-Android luza kuqokelela inxenye yale ndlela ikhethekileyo yokubonisa kunye nokubalisa amabali.
Insiza ikuvumela yongeza imizobo yezandla, imibhalo, imifanekiso, iifoto, umculo ongasemva okanye utshintshe nesantya sokudlala ividiyo okanye lilizwi lakho elishicilelwe nefowuni yakho. Unokwenza iividiyo zentsusa zokuphakamisa elinye lamatheko okuzalwa ezinye zezihlobo zakho okanye wenze isifundo esincinci sokuchaza ukuba isixhobo sisebenza njani kwinkqubo yoyilo enjengeFotohop.
Uhlelo lokusebenza simahla kwiVenkile yokuDlala kwaye ibize oko njengee-micropayments ezikuvumela ukuba ufikelele kumbala wesiko, iibrashi kunye nokunye. Isixhobo sokuyila ukuhlela iividiyo kwifowuni yeselfowuni enje ngefowuni ye-Android, ethi yona ikhethe ukudweba ngesandla ungabalisa amabali avela kwezo zixhobo zikhethiweyo zeentsuku zeholide ezikulindeleyo kulePasika.
Zoba uBomi bam sisixhobo esisebenzayo ujoyina abanye abakumgangatho ophezulu injani iphepha leBambo eza kwi-Android ngoDisemba wonyaka ophelileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Yenza ibali elincinci eliphathwayo kwividiyo ene-Draw Draw My Story app